Adduunka Ilaa Hadda - Warka ugu fiican MAANTA
Wiil 14 jir ah ayaa Yaxaas wejiga kaga dhuftay si uu uga baxsado ka dib markii bahalku uu daanka ka xiray dhallinta oo uu isku dayay inuu jiido si uu u dhinto.
Wiil dhalinyaro ah ayaa si mucjiso ah uga baxsaday daanka Yaxaaska kadib markii uu madaxa kaga dhuftay. Om Prakash Sahoo, oo 14 jir ah, ayaa asxaabtiisa kula joogay wabiga Kani ee dalka Hindiya, bahalkaasi wuxuu ku kala gooyay biyaha hoostiisa, wuxuuna jiidhay ilaa uu geeriyoodo. 1Dhallinyarada waxaa u suurtagashay in ay ka baxsadaan daanka YaxaaskaDhibcaha: Alamy... read more
Categories Wararkii U Danbeeyay Tags wiil dhalinyaro ah, sano, jiid, Duur, cara, yaxaas, ka dib, ku lifaaqan, inta u dhaxaysa, baxsad, daanka, garaac, dhinaca, muerte, ilmahaaga, waayo,, Sus, daweeyaa Tomato comentario un
Wiil dhalinyaro ah ayaa si mucjiso ah uga baxsaday daanka Yaxaaska kadib markii uu madaxa ka feeray. Om Prakash Sahoo, oo 14 jir ah, ayaa asxaabtiisa kula joogay wabiga Kani ee dalka Hindiya, bahalkaasi wuxuu ku kala gooyay biyaha hoostiisa, wuxuuna jiidhay ilaa uu geeriyoodo. 1 Dhallinta ayaa u suurtagashay in ay ka baxsadaan daanka… read more
Waxaan ka soo cararay qoyskaygii Amish ee aan abtirsiinyada u ahay markaan 18 jir ahaa
Hooyo ku soo barbaartay Amish ayaa daaha ka qaaday sida dumarka iyo carruurta loogu geystay xadgudubyo xun xun oo dhanka galmada ah iyo "loo diiday" qoysaskooda haddii ay jabiyaan sharciyada. Markii Emma Gingerich oo 36 jir ah ay ka carartay nolosha kaliya ee ay waligeed taqaanay iyadoo 18 jir ah, waxay kaliya qaadatay waxbarasho fasalka sagaalaad... read more
Categories Wararkii U Danbeeyay Tags Amish, sano, marka, baxsado, Familia, qaraabo ah, Waxaan lahaa Tomato comentario un
Waxaa la yaab leh iyadoo Injineer 37 jir Ingiriis ah uu ku toogtay labo saaxiibo ah dukaan weyn oo Mexico ah xilli ay wax ka iibsanayeen.
Nin Ingiriis ah ayaa lagu toogtay dukaan ku yaala Mexico isaga iyo labadiisa saaxiib markii waalidkii oo murugeysan ay sheegeen in uu ku sugnaa meel qaldan waqti qaldan. Injineer Software Ben Corser, oo 37 jir ah, kana soo jeeda Cornwall, ayaa la toogtay isaga oo hawlihiisa shaqo ka waday Colima, galbeedka Mexico,… read more
Categories Wararkii U Danbeeyay Tags Amigos, sano, la dilay, Ingiriis, sida, iibsaday, con, back, Engineer, Reer Mexico, halka, qarsoodi, dukaanka, toogasho Tomato comentario un
Libaax-badeedka 'Zombie' waxay weerartaa centimitir ugaadhsiga ugaarsiga quusiyaha
Waa xilliga argagaxa leh ee shark "zombie" uu ku weeraro injigiisa ugaadhsiga ee quusiye yaab leh, dhammaantoodna waxay yiraahdaan wax isku mid ah. Euan Rannachan, oo 36 jir ah, ayaa ku sugnaa Jasiiradda Guadalupe, oo qiyaastii 200 oo kilomitir u jirta xeebta Mexico, markaasoo uu soo muuqday shark-cad weyn oo ku haray biyaha. … read more
Categories Wararkii U Danbeeyay Tags weerar, yaabay, quusta, santimitir, suga, sharku, ZOMBIE Tomato comentario un
Putin ayaa bishii April laga daweeyay 'kansar sare' iyadoo 'dhammaadka laga yaabo inuu soo dhawaado' taliskii Kremlin-ka, ayay yiraahdeen madaxda sirdoonka Mareykanka.
XANUUNKA Vladimir Putin ayaa bishii April laga daweeyay cudurka kansarka, sida ay sheegeen madaxda sirdoonka Mareykanka. Saraakiisha sarsare ayaa lagu soo waramayaa inay sheegeen in kaaliyeyaasha gudaha Kremlin-ka ay "dareen in dhamaadka uu soo dhow yahay" kaligii-taliyihii Ruushka oo 69 jir ah. 2 Madaxweynaha Ruushka Vladimir PutinDhibcaha: AP 2Putin ayaa la kulmay Boris Titov, wakiilka… read more
Waa maxay rhinoplasty iyo waa maxay faa'iidooyinkeeda?
Caafimaad ahaan ama sababo qurxoon dartood, rhinoplasty waa ikhtiyaar macquul ah oo dib u qaabaynta ama hagaajinta sanka. Dad badan oo badan ayaa u soo jeestay habkan si ay u xalliyaan dhibaato sanka gaar ah. Laakiin waa maxay dhab ahaantii iyo maxay yihiin faa'iidooyinka ugu muhiimsan? Maqaalkeena maanta wuxuu ujeedadiisu tahay inaan cadeyno… read more
Waa maxay baayacmushtarku maxaase loogu talagalay?
Faa'iidada ganacsigu way dhaafsiisan tahay rabitaan, maadaama loo baahan yahay farsamooyin gacan ka geysta waxa la hiigsanayo in la gaaro. Maanta, suuqgeyntu waxay isticmaashaa aqoon kala duwan oo la qaatay sannadihii la soo dhaafay si loo kiciyo iibsashada macaamiisha. Wax kala iibsiga shirkadaha waa… read more
Barack Obama ayaa hogaaminaya xuska Platinum Jubilee ee boqorada adduunka oo dhan iyadoo Pope iyo Macron ay fariimo direen
BARACK Obama waxa uu sheegay in boqoradu ay “ay i xasuusinayso ayeeyaday” iyadoo shaqsiyaad ka kala yimid daafaha caalamka ay boqorka ugu hambalyeeyeen rikoorka 70-ka sano ee ay ku fadhido carshiga. 96-sano jirku waa Boqorkii ugu horeeyay ee British ah oo u dabaaldagaya xuska jubilee Platinum, taageerayaasha boqortooyada ee adduunka oo dhan ayaa... read more
Hooyada ayaa ku kufsatay tareenka iyadoo ay raacayso kormeeraha tigidhada iyo saddex kale ka dib markii lagu soo jiiday fasalka koowaad
MOM ayaa lagu eedeeyay in kooxdu ay ku kufsadeen tareenka iyada oo uu geystay kormeeraha tigidhada iyo saddex nin oo kale ka dib markii lagu soo jiiday gaadhiga fasalka koowaad. Hooyada da'da yar ee leh laba caruur ah ayaa banaysay kursigeedii heerka dhaqaalaha ka dib markii la siiyay qol qaboojiye ah intii lagu jiray ... read more
Bogga1 Bogga2 ... Bogga1.358 Xiga →
Aduunka Ilaa Hadda | 2022